Daemon Tools ကိုအခမဲ့ download လုပ်နည်း Androidsis
Ignacio Sala | 11/07/2021 18:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 16/07/2021 00:32 | အခြားကိရိယာများ, လဲ tutorial
ကွန်ပျူတာပစ္စည်းအများစုသည် desktop နှင့် portable နှစ်ခုလုံးဖြစ်သော်လည်း DVD player မပါ ၀ င်တော့ပါဤပုံစံသည်အချို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်အထူးသဖြင့်သုံးစွဲသူအမြောက်အများကြားတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
သင်သည်ဤသိုလှောင်မှုပုံစံနှင့်မှန်မှန်သို့မဟုတ်ကြိုကြားကြိုကြားလုပ်ဆောင်မှုရှိပါကသင်သည် Daemon Tools အက်ပလီကေးရှင်း၊ ISO format နဲ့ပုံရိပ်တွေဖန်တီးရန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အကောင်းဆုံး applications များကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအကြောင်းအရာများကိုမိတ္တူကူးရန်အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖြစ်သည်။
1 Daemon Tools ဆိုတာဘာလဲ
1.1 Daemon Tools များစွမ်းရည်
2 Daemon Tools များကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ
2.1 ISO ပုံရိပ်များ၏ content တည်းဖြတ်
2.3 ISCSI ကန ဦး
2.5 Windows ပေါင်းစည်းမှု
3 Daemon Tools များကိုအခမဲ့ download လုပ်နည်း
4 Daemon Tools မှအခြားနည်းလမ်းများ
Daemon Tools ဆိုတာဘာလဲ
Daemon Tools သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးပြည့်စုံသော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စီဒီများနှင့်ဒီဗီဒီများကဲ့သို့သောရုပ်ဝတ္ထုမီဒီယာတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများ၏အတိအကျမိတ္တူများ။ သီအိုရီအရဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၏ကြာချိန်သည် hard disk ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီ format ကိုပြသခဲ့သည် အလွန်နိမ့်အရည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည် ၎င်းတို့သည်အလွန်လွယ်ကူစွာခြစ်ရာများကြောင့်သိုလှောင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားစေနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာပျောက်သွားပြီလို့ပြောရင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီဗီဒီကိုပြန်ဆယ်တင်တာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊
Daemon Tools များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောမဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အစဉ်အမြဲနေလော့ သင်၏မင်္ဂလာဆောင်၏ဗီဒီယို၊ မည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံဖြင့်သင်ရှာမတွေ့နိုင်သောရုပ်ရှင်၊ သင်၏ခရီးအားလုံး၏ဓာတ်ပုံများ၊ သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများ - ကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးယူထားရမည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် ISO format ထက်ပိုကောင်းလျှင်၊ ဤပုံစံသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားခံတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာအားလုံး၏တူညီသောမိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ အခြား disk သို့အလွယ်တကူပြန်ယူနိုင်သည်အမြဲတမ်းအရန်သင့်ထားရန်၊
သငျသညျခွင့်ပြု application တစ်ခုရှာနေလျှင် စီဒီများနှင့်ဒီဗွီဒီများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုမှာ Daemon Tools ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကမစစ်ဆေးခဲ့ပါကကန့်သတ်ချက်များပါဝင်သည်။
Daemon Tools များစွမ်းရည်
စကားဝှက်တစ်ခုထည့်ပါ လျှောက်လွှာမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့ပုံရိပ်များသို့မဟုတ်အခြား applications များနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့ပုံရိပ်တွေရန်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုaပေးထားပါတယ် အလင်းဆောင်ပုဒ်နှင့်မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်အလင်းသည်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်နှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအထိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်4ကွဲပြားခြားနားသောကို virtual drives တွေကို.
လိုက်ဖက်တဲ့ဖိုင် TrueCrypt ကို
image formats တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာ: ISO, MDS, B5T, CDI, B6T, MDX, CDI, BIN / CUE, APE / CUE, FLAC / CUE အခြားသူတွေအကြား။
စာကြည့်တိုက် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်သိမ်းထားသောပုံအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာမှ။
Daemon Tools များကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ
ငါယခင်အပိုင်း၌မှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့, Daemon Tools သည်အပြည့်စုံဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ISO format နဲ့ဖိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ။ သို့သော်ဤပုံစံဖြင့်ရုပ်ပုံများဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းအပြင်၊ များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းခွင့်ပြုသည်။
ISO ပုံရိပ်များ၏ content တည်းဖြတ်
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် သိမ်းထားသောဖိုင်အသစ်များကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်ဖယ်ပါ ISO ပုံရိပ်၌တည်၏။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုမှားယွင်းသောလက်များဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်းကိုတားဆီးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားစကားဝှက်တစ်ခုထပ်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် virtual hard drives တွေကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးပါ၊ TrueCrypt ကွန်တိန်နာများနှင့်အမျိုးမျိုးသော RAM (Random Access Memory) disk များ။
ISCSI ကန ဦး
ဒီ function ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် iSCSI ပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ပါ ဝေးလံသောပုံများ၊ virtual hard drive များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိုလှောင်မှုယူနစ်များကို၎င်းတို့ကွန်ပျူတာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ထားသကဲ့သို့အသုံးပြုပါ။
ဤလျှောက်လွှာ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာရုပ်ပုံများထဲတွင်ရုပ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည် Catch မှတဆင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များထံမှ.
ရေးသားသူ: SIA AVB Disc ပျော့ပျောင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ဤဖိုင်ပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ထို option ရှိသည် Application ကို Windows operating system သို့ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ညာဘက် mouse ကိုခလုတ်နှိပ်တဲ့အခါမှာပြသသည့် Contextual menus တွေကနေကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသော options များအားလုံးကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က, ရရှိနိုင်သော applications များအားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ o Shareware။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ application များသည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီးလုံးဝလွတ်လပ်သော application များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ open source အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
shareware applications များဖြစ်ကြသည် စမ်းသပ်အက်ပ်များ ၎င်းတို့တွင် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးမပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှကုန်ပစ္စည်းမထုတ်ပါကလျှောက်လွှာကိုရပ်တန့်သည်အထိရက်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
Daemon Tools များသည်ထိုကဲ့သို့သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တတ်နိုင်သမျှမှန်သည်နေစဉ် Daemon Tools ကိုလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ, ဒီဗားရှင်း, Lite အဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုခံရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လျှောက်လွှာအတွက်ငွေပေးချေခြင်းမပြုပါက၎င်းကိုသင်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Daemon Tools Pro application ၏စျေးနှုန်းသည် ၆၄.၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူပြီးများစွာသောအရာရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံလောက်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောစျေးနှုန်း။
ကံမကောင်းစွာပဲဒီတော့မဟုတ်ပါဘူး Mobile Forum မှ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံမပေးပါကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အပြည့်အဝအခမဲ့ဖြစ်သောတူညီသောခိုင်လုံသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Daemon Tools မှအခြားနည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြတ်သန်းသွားလျှင် ဖိုင်များကို ISO format ဖြင့်ဖန်တီးဖွင့်ပါရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် WinCDEmu၎င်းသည် open source ဖြစ်သော application တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလုံးဝအခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးချနိုင်သည်။
WinCDEmu ကဖိုင်တွေကို format နဲ့ထောက်ပံ့တယ် ISO, CUE, NRG, MDS / MDF, CCD, IMG ... အခြားသူများအနက် Windows XP နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်သောဗားရှင်းလည်းရှိသည် (၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ) ၎င်းသည် Blu-ray, DVD နှင့် CD drives များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် virtual drives များကိုဖန်တီးခြင်းတွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
မင်းသာလိုချင်ရင် ISO format နဲ့ဖိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်, သင် app ကိုစမ်းသင့်ပါတယ် ISODiskပုံရိပ် ၂၀ အထိအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်၊ DVD နှင့် CD များကို ISO format သို့ပြောင်းလဲပေးပြီး Windows XP နှင့်လိုက်ဖက်ညီသောသိုလှောင်မှု (20 MB မှတ်ဉာဏ်၊ Intel Pentium 64 MHz သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှု ၁၀ ​​MB လိုအပ်သည်) သည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အရင် app ကဲ့သို့ ISOBuddy ISO ပုံရိပ်တွေနဲ့ဖန်တီးခွင့်ပေးတယ် သို့သော်၎င်းသည်အခြားသူများအကြား GI, ISO, NRG, CDI, MDF, IMG, DVD, B5I, B6I, PDI, BIN, CCD, DMG အမျိုးအစားများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ISOBUddy သည်ငါတို့တတ်နိုင်သမျှ application တစ်ခုဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ, လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ၌မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျိုးမပါ ၀ င်ပြီး ISO format ဖြင့်ဖိုင်များဖန်တီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Daemon Tools များကိုအခမဲ့ download လုပ်နည်း
Android အတွက်ထိပ်တန်း Flashlight Apps ၅ ခု